"PROTECT THE FINANCIAL WELL-BEING OF YOUR LOVED ONES"
Life Insurance Premium Calculator (အသက်အာမခံ)
1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MM January February March April May June July August September October November December YYYY 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Next Year Age (နောက်နှစ်အသက်)
Other 2nd Engineer cotton factory (ဒု-စက်မှုဝါဂွမ်းစက်) Actor/Actress (ဇာတ်လိုက်မင်းသားလူကြမ်း) Alcohol Seller (အရက်ရောင်းသူ) Assistant / Deputy Assistant Engineer (လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ/ဒု-လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ) Assistant Chemist (လက်ထောက်ဓါတုဗေဒအရာရှိ) Assistant Engineer (Iron Casting) (လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာသံရေကြို) Assistant Engineer (Military) (လက်ထောက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ) Assistant Engineer of drilling (လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ(တွင်းတူး)) Assistant Officer of Rail Road (လက်ထောက်သံလမ်းဗိုလ်) Assistant technical engineer (ဒု-စက်မှုလက်မှုအင်ဂျင်နီယာ) Automobile mechanic (ကားပြင်ဆရာ) Blacksmith (ပန်းပဲဆရာ) Captain/ Assistant Captain (ရေကြောင်းမှူး/ဒု-ရေကြောင်းမှူး) Carpenter (လက်သမား) Costruction Engineer (တည်ဆောက်ရေးမှူး) Cutter of Saw mill (လွှဝိုင်းဆရာသစ်စက်) Deputy Captain (IWT) (ဒု-သင်္ဘောဦးစီး(ပရသ)) Dermatologist (အထူးကိုယ်ရေပြားရောဂါကု) Distiller (အရက်ချက်အလုပ်သမား) Driver/ Spareman (ယာဉ်မောင်း/ယာဉ်နောက်လိုက်) Engineer (airplane) (အင်ဂျင်နီယာ(လေယာဉ်တွင်လိုက်ရန်လိုကလိုက်ရသည်)) Field staffs of social voulnteer group(ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ထမ်းတပ်၊ တပ်စိတ်မှူး) Fire department lieutenant/ inspector/ fire birgade (မီးသတ်ဗိုလ်၊ မီးစစ်ဆေးရေးအရာရှိ၊ မီးသတ်ဌာန) Foreman (ဖိုမင်) Inspector of boiler (ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးအရာရှိ) Jockey/Actress (ဂျော်ကီ) Kerosene oil driller (ရေနံတွင်းဆရာ) Labour of lead, iron crushing factory (ခဲ၊ သံ၊ ခွဲစက်အလုပ်သမား) Labourer of match lighter factory (မီးခြစ်စက်အလုပ်သမား) Labourer of silver work (ဒန်သတ္တုအလုပ်သမား) Lapidist (ကျောက်သွေးဆရာ) Lineman (လိုင်းမင်း) locomotive oil filler (မီးရထားစက်ခေါင်း၊ဆီလောင်း) Machine Operator (အော်ပရေတာစက်မောင်းသူ) Machine repair man (၀ါယာလက်စက်ပြင်) Manager (Liquor shop) (မန်နေဂျာ(အရက်ဖြူဆိုင်)) Mason (ပန်းရံ) Mechanic (Jute mill) (စက်ပြင်(ဂုံလျှော်စက်)) Mechanic (စက်ဆရာ) Medical Officer (country side) (နယ်လှည့်ကျေးရွာကာကွယ်ရေး) Mines contractor (သတ္တုတွင်းကန်ထရိုက်တာ) One sighted blind person (မျက်လုံးတစ်ဘက်ကန်း) Owner of Paraffin Factory (ရေနံဆီချက်ဖိုပိုင်ရှင်) Person who check mining onceaweek (တပါတ်တကြိမ်ကျသတ္တုတွင်းသို့ဝင်ကြည့်ရသူ) Person who pour oil (ဆီလောင်း) Petrol transporting assistant (ဓါတ်ဆီပို့အကူအညီ) Polic Officer/ Investigator (ရဲမှူး/စုံစမ်းရေးမှူး) Police Guard (ဂါတ်ဗိုလ်) Projectionist (ရုပ်ရှင်ပြသမား) Railway Locomotive Mechanic (မီးရထားစက်ခေါင်းပြင်ဆရာ) Railway Ticket Inspector (မီးရထားလက်မှတ်စစ်) Reserve policeman (အရံရဲသား) Sailor/ Deputy Captain (သင်္ဘောသား/ဒု-သင်္ဘောဦးစီး) Signal flag raising person (Railway) (အလံပြ(မီးရထား)) Steerman of ocean liner (ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတက်မကိုင်) Student (15 years old girl)ကျောင်းသူ အသက်(၁၅)နှစ် Telegraph operator (ကြေးနန်းဆက်သွယ်သူ) Tin worker (သံဖြူဆရာ) Township Engineer (Road work) (မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာလမ်းလုပ်ငန်း) Township Engineer (မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာ) Train Inspector and repairman (မီးရထားစမ်းသပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ရေး) Typewriter (စာစီဆရာ/စာစီသမား) Wireless telegraphic department (ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းဌာန)
Sum Insured/Kyats (အာမခံတန်ဖိုး/ကျပ်)
Sum Insured အာမခံတန်ဖိုး Premium ပရီမီယံတန်ဖိုး
Sum Insured ForaPerson (Kyats) တစ်ဦးခြင်းအာမခံတန်ဖိုး(ကျပ်)
No. Of Members လူဦးရေ
* အသက် 18 နှစ်မှ 60နှစ်အတွင်းရှိသူများသာ စုပေါင်းအသက်အာမခံထားခွင်.ရှိသည်။
Premium ForaPerson (Kyats)တစ်ဦးချင်းပရီမီယံတန်ဖိုး (ကျပ်)
Sum Insured (အာမခံတန်ဖိုး)
1 Unit(500000 Ks)2Unit(1,000,000 Ks)3Unit(1,500,000 Ks)4Unit(2,000,000 Ks)5Unit(2,500,000 Ks)6Unit(3,000,000 Ks)7Unit(3,500,000 Ks) 8 Unit(4,000,000 Ks)9Unit(4,500,000 Ks) 10 Unit(5,000,000 Ks)
1 Unit(1,000,000 Ks)2Unit(2,000,000 Ks)3Unit(3,000,000 Ks)4Unit(4,000,000 Ks)5Unit(5,000,000 Ks)
© 2015 Grand Guardian Insurance Public Co.Ltd. All Rights Reserved. 2016-2017.